सुन्दा अ’चम्म लाग्न सक्छ , तर आमा बन्दै छिन नायिका श्वेता खड्का ! – AB Sansar
सुन्दा अ’चम्म लाग्न सक्छ , तर आमा बन्दै छिन नायिका श्वेता खड्का !
November 8, 2020 adminLeaveaComment on सुन्दा अ’चम्म लाग्न सक्छ , तर आमा बन्दै छिन नायिका श्वेता खड्का !
सुन्दा अ’चम्म लाग्न सक्छ , तर यो सत्यता नै हो ! आमा बन्दै श्वेता खड्का
चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’ बाट नेपाली चलचित्रमा प्रवेश गरेकी अभिनेत्री श्वेता खड्काले नयाँ चलचित्रमा काम गर्ने भएकी छन। उनी अभिनीत चलचित्र ‘कान्छी’ दुई वर्षअघि प्रदर्शनमा आएको थियो। अहिले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा ध्यान दिँदै आएकी उनी यम थापाको लेखन तथा निर्देशनमा बन्न लागेको नयाँ चलचित्रमा अनुबन्धित भएकी हुन्। *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
चलचित्रमा छोरीको भूमिकामा सेड्रिना शर्मालाई लिने प्रयास भइरहेको छ। डेब्यु चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’ बाट लभर गर्लको भूमिकामा देखिँदै आएकी श्वेतालाई पहिलो पटक दर्शकले भिन्न भूमिकामा देख्न पाउनेछन्। चलचित्रमा उनको केन्द्रीय भूमिका छ। चलचित्रमा समावेश अन्य कलाकार तथा प्राविधिकको जानकारी कही समयमा गराउने निर्देशक थापाले बताए।*** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
गलत समाचार लेखेवापत दुई सम्पादकलाई सर्वोच्च अदालतमा माफी माग्न दबाव
May 25, 2021 May 25, 2021 Ab-संसार